အလှူရှငျမရောကျတဲ့ ဒသေတှဆေီ သှားရောကျလှူဒါနျးနတေဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ
ခိုငျနှငျးဝဟော ရဘေေးသငျ့ဒဏျခံနရေတဲ့ နရောဒသေတှအေတှကျ အဆကျမပွတျအလှူအတနျးတှေ ပွုလုပျလို့နပေါတယျ။ ဒီနမှေ့ာ လညျး ကရငျပွညျနယျဘားအံမွို့မှာရှိတဲ့ရဘေေးသငျ့နရောဒသေတှမှော အလှူအတနျးတှသှေားလုပျမယျလို့လညျး သူကဆိုပါတယျ။
ပရဟိတမငျးသမီးတဈယောကျဖွဈတဲ့ ခိုငျနှငျးဝဟော သူဦးဆောငျတဲ့ ခိုငျနှငျးဝပေရဟိတအသငျးသားတှနေဲ့အတူ သွဂုတျလ ၅ ရကျနေ့ မနကျပိုငျးက ကရငျပွညျနယျ ဘားအံမွို့အတှငျးမှာရှိတဲ့ရဘေေးသငျ့နရောဒသေတှမှော အလှူအတနျးတှေ သှားလုပျဖွဈနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
'' ဘားအံမွို့ နတျကြှနျးရှာ အိမျခွေ (၁၇၀)ရှိပွီး အလှူရှငျမရောကျသေးတဲ့နရောဖွဈပါတယျ။ ရနျကုနျကနေ မနကျ ၄ နာရီ စထှကျပါ့မယျ။
ခိုငျနှငျးဝပေရဟိတအသငျး 09250274324,09420124618'' ဆိုပွီးတော့ သွဂုတျလ ၄ ရကျနညေ့ ၈ နာရီက ခိုငျနှငျးဝရေဲ့ ဖစျေ့ဘှတျစာ မကျြနှာပျေါမှာရေးသားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
သွဂုတျလ ၄ ရကျနတေု့နျးကလညျး ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး ဒိုကျဦးမွို့မှာရှိတဲ့ ရဘေေးသငျ့ဒဏျ ခံနရေတဲ့ အိမျခွေ ၁၄၂ အိမျအတှကျ ငှသေား ၁၀ သိနျးကို လှူဒါနျးခဲ့တဲ့အပွငျ အသကျကွီး အဘိုးအဘှားတှအေတှကျကိုလညျး ဆေးကုသစားရိတျမြား ထပျမံလှူဒါနျးခဲ့တဲ့အကွောငျး သွဂုတျလ ၄ ရကျနေ့ ညနေ ၂ နာရီခှဲက သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာပျေါမှာ ရေးသားခဲ့ပါသေးတယျ။
'' ပဲခူးတိုငျး ဒိုကျဦး သုံးခှ မှာ ရဘေေးဒဏျခံရတဲ့ ပွညျသူမြားကို အိမျထောငျစု ၁၄၂ အိမျအတှကျ ငှသေား (၁၀) သိနျးကို လှူဒနျးခဲ့ပါတယျ။ ရဘေေးဒဏျခံရတဲ့အိမျထောငျစုမြားအပွငျ သကျကွီးအဖှားမြားအတှကျဆေးကုသစရိတျမြားကိုလညျးလှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ ကုသိုလျ ကောငျးမှု အစုစုတို့ကို အလှူ့ရှငျမြားနဲ့တကှ ၃၁ဘုံရှိ သတ်တဝါအားလုံးတို့ကို အမြှပေးဝပေါတယျ. သာဓုချေါဆိုကွပါရှငျ'' လို့ဆိုပါတယျ။
ခိုငျနှငျးဝဟော ပရဟိတအလုပျတှနေဲ့ ပတျသကျလာရငျ စှမျးစှမျးတမံဆောငျရှကျနသေူတဈဦးပါ။ သူ့အနနေဲ့ United Act ရဲ့ ကလေး သူငယျ လူကုနျကူးမှု တားဆီးရေးဆိုငျရာ အထူးသံတမနျ ခနျ့အပျခွငျး ခံရတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈပွီး သံတမနျအဖွဈ ခနျ့အပျခွငျး ခံရပွီးနောကျ အမြိုးသမီးတှနေဲ့ ကလေးတှအေတှကျသူမတတျစှမျးသလောကျ အားတကျသရော ပါဝငျကူညီဆောငျရှကျ ပေးသူ တဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။
လဲကသြူတှကေို ပွနျထနိုငျဖို့ အားပေးစကားဆိုခဲ့တဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ
ထိုငျးနိုငျငံမှာရှိတဲ့ ခိုငျနှငျးဝရေဲ့ ပရိသတျတှတေညျထောငျထားတဲ့ ခိုငျနှငျးဝပေရဟိတကိုယျစားလှယျအသငျးဟာ ထိုငျးနိုငျငံမှာရှိတဲ့ ပရဟိတ အသငျးရဲ့ ရညျရှယျခကျြကတော့ ပွညျပမှာ ရောကျရှိနပေမေယျ့ ဒုက်ခရောကျနကွေတဲ့ မွနျမာလူမြိုးတှကေို အခငျြးခငျြး ကူညီရိုငျးပငျးပွီး တတျစှမျးသမြှကူညီပေးနိုငျဖို့အတှကျရညျရှယျခကျြထားတယျလို့လညျး Duwun Media ရဲ့ အငျတာဗြူးမှာ ဖွဆေိုခဲ့ပါသေးတယျ။
ခိုင်နှင်းဝေဟာ ရေဘေးသင့်ဒဏ်ခံနေရတဲ့ နေရာဒေသတွေအတွက် အဆက်မပြတ်အလှူအတန်းတွေ ပြုလုပ်လို့နေပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ လည်း ကရင်ပြည်နယ်ဘားအံမြို့မှာရှိတဲ့ရေဘေးသင့်နေရာဒေသတွေမှာ အလှူအတန်းတွေသွားလုပ်မယ်လို့လည်း သူကဆိုပါတယ်။
ပရဟိတမင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေဟာ သူဦးဆောင်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေပရဟိတအသင်းသားတွေနဲ့အတူ သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေဘေးသင့်နေရာဒေသတွေမှာ အလှူအတန်းတွေ သွားလုပ်ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
'' ဘားအံမြို့ နတ်ကျွန်းရွာ အိမ်ခြေ (၁၇၀)ရှိပြီး အလှူရှင်မရောက်သေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကနေ မနက် ၄ နာရီ စထွက်ပါ့မယ်။
ခိုင်နှင်းဝေပရဟိတအသင်း 09250274324,09420124618'' ဆိုပြီးတော့ သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့ည ၈ နာရီက ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာ မျက်နှာပေါ်မှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့တုန်းကလည်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဒိုက်ဦးမြို့မှာရှိတဲ့ ရေဘေးသင့်ဒဏ် ခံနေရတဲ့ အိမ်ခြေ ၁၄၂ အိမ်အတွက် ငွေသား ၁၀ သိန်းကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့အပြင် အသက်ကြီး အဘိုးအဘွားတွေအတွက်ကိုလည်း ဆေးကုသစားရိတ်များ ထပ်မံလှူဒါန်းခဲ့တဲ့အကြောင်း သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့ ညနေ ၂ နာရီခွဲက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်။
'' ပဲခူးတိုင်း ဒိုက်ဦး သုံးခွ မှာ ရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့ ပြည်သူများကို အိမ်ထောင်စု ၁၄၂ အိမ်အတွက် ငွေသား (၁၀) သိန်းကို လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ ရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့အိမ်ထောင်စုများအပြင် သက်ကြီးအဖွားများအတွက်ဆေးကုသစရိတ်များကိုလည်းလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ် ကုသိုလ် ကောင်းမှု အစုစုတို့ကို အလှူ့ရှင်များနဲ့တကွ ၃၁ဘုံရှိ သတ္တဝါအားလုံးတို့ကို အမျှပေးဝေပါတယ်. သာဓုခေါ်ဆိုကြပါရှင်'' လို့ဆိုပါတယ်။
ခိုင်နှင်းဝေဟာ ပရဟိတအလုပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်နေသူတစ်ဦးပါ။ သူ့အနေနဲ့ United Act ရဲ့ ကလေး သူငယ် လူကုန်ကူးမှု တားဆီးရေးဆိုင်ရာ အထူးသံတမန် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရပြီးနောက် အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကလေးတွေအတွက်သူမတတ်စွမ်းသလောက် အားတက်သရော ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက် ပေးသူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လဲကျသူတွေကို ပြန်ထနိုင်ဖို့ အားပေးစကားဆိုခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ပရိသတ်တွေတည်ထောင်ထားတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေပရဟိတကိုယ်စားလှယ်အသင်းဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပရဟိတ အသင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့  ပြည်ပမှာ ရောက်ရှိနေပေမယ့် ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေကို အချင်းချင်း ကူညီရိုင်းပင်းပြီး တတ်စွမ်းသမျှကူညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ထားတယ်လို့လည်း Duwun Media ရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။